पोखराका २० प्रतिशत होटेल व्यवसायी पलायन, तत्काल पहल नगरिए अवस्था जटिल बन्ने चिन्ता
एनसेल बाह्रखरी गल्फ पोखराका २० प्रतिशत होटेल व्यवसायी पलायन, तत्काल पहल नगरिए अवस्था जटिल बन्ने चिन्ता ‘सरकारले व्यवसाय बन्द गरायो, अझै खोल भनेको छैन’
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरूले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गराएर सीमा नाका खुलाउन आग्रह गरेका छन् ।
अहिले पनि चोर बाटो प्रयोग गरेर मान्छे भित्रिएको भन्दै उनीहरूले बरु औपचारिक रुपमै आउन दिइए पर्यटन प्रवर्द्धन सहयोग खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ । सीमा नाकामा पीसीआर परिक्षण गराएर नेपाल भित्रन दिने व्यवस्था गरे कोभिड १९ को चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत पुग्ने अपेक्षा उनीहरूको छ ।
कोभिड १९ को असरबाट पर्यटनलाई उकास्ने प्रयासस्वरुप बाह्रखरी मिडियाले एनसेल-बाह्रखरी पहलअन्तर्गत पोखराका पर्यटन व्यवसायीबीच गतसाता गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी व्यवसायीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । होटल संघ पोखराका निर्वमान अध्यक्ष भरत पराजुलीले कोभिड १९ का कारण पोखराका २० प्रतिशत होटेल विस्थापित भइसकेको बताए ।
एनसेल प्रमुख प्रायोजक रहेको बाह्रखरी गल्फको यो प्रतियोगितामा नेपाल टुरिजम बोर्ड, गण्डकी प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्य रहेको छ । अन्य प्रायोजकमा डिसहोम, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, काल्र्सबर्ग, सिभास रिगल, हुन्ड्याई मोटर्स, र आईएमई रहेका छन् ।
घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीले व्यवसाय छोडिसकेको उनले बताए । “कतिपय घरबेटीले अहिले नछोड्नु होस्, बत्ती, पानीको पैसा तिर्नु, अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै भाडा दिनु भनेर पनि राखेका छन् । शुक्रबार, शनिबार अलिअलि चहल पहल छ, आइतबारदेखि बिहीबारसम्म अकुपेन्सी न्यून छ । अवस्था यस्तै भयो सुधार आएन भने छिट्टै कोल्याप्स हुने सम्भावना छ,” उनले भने । यद्यपि त्यस्तो नहोस् भनेर आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए । उनले सीमाबाट चोर बाटो प्रयोग गरेर मान्छे आइरहेको भन्दै त्यसरी भन्दा औपचारिक रुपमै पीसीआर गराएरै भए पनि नेपाल छिर्न दिने व्यवस्था गरिए पर्यटन उद्योगलाई केही भएपनि राहत दिने बताए । स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गराएर सीमा नाका छिटो नखोलिएन त्यसको असर लामो समयसम्म रहने र पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभका लागि लामो समय लाग्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले अहिले पर्यटन व्यवसाय सुरक्षित राख्ने र यसलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । यदि राज्य अभिभावक हो भने व्यवसायीलाई राहतका प्याकेज तुरुन्त दिनुपर्ने उनले बताए । “सरकारले नै घोषणा गरेको राहत प्याकेज कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । घोषणा गरिएको राहत प्याकेज कार्यान्वयन निकै ढिला भइरहेको छ । एक्स्पाएर भएपछि औषधि उपचार गर्नुको औचित्य हुँदैन,” उनले भने ।
पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभका लागि सबैभन्दा पहिला साझेदारीमै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । “निजी क्षेत्रले मात्रै गर्छु भनेर पनि सक्दैन, सरकारले मात्रै गर्छु भनेर पनि हुँदैन । साझेदारीमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने । अहिले पर्यटन उद्योग शत्‌प्रतिशत घाटामा रहेको उद्योग भएको भन्दै उनले अरु उद्योगको तुलनामा यो उद्योग सबैभन्दा ढिलो रिभाइभ हुने निश्चित रहेको बताए । उनले आन्तरिक पर्यटनलाई अगाडि बढाउन दुई दिन बिदा दिने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरे । “सातामा दुई दिन मात्रै बिदा भइदियो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो राहत हुन्छ । अहिले शनिबार बिदा हुँदा शुक्रबार हाँक्किएर काठमाडौंलगायत ठाउँबाट आन्तरिक पर्यटक पोखरा आइरहेका छन् । उनीहरू आतुर गरेर हिँडिरहेका छन् । यदि दुई दिन बिदा हुने हो भने उनीहरू सहज रुपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्छन् । त्यसले आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिन्छ,” उनले भने ।
उनले दीर्घकालीन पर्यटनको कुरा गर्दा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन नगरी अगाडि बढ्नै नसक्ने बताए । त्यसका लागि प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पोखरामा रहेका पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न संस्थागत रुपमा प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।
नाट्टा गण्डकी प्रदेशका प्रथम उपाध्यक्ष हरिराम अधिकारीले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा धेरै कुरा सरकारमै निर्भर रहेको बताए । न्यु नर्मल अवस्थामा जाने क्रममा पोखराका कतिपय गन्तव्यहरू खुला गर्न ढिलो गरिएको र पीसीआर अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले आन्तरिक पर्यटनलाई निरुत्साहित पनि बनाएको उनले बताए । “मुक्तिनाथ मन्दिर खुल्यो तर मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानको लागि पीसीआर अनिवार्य भन्ने छ । यसअघि केही समय मर्दी हिमाल खुल्यो, पछि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य भनियो त्यसपछि पर्यटक जान निकै कम भयो, जानैपर्नेहरू मात्रै गए । अहिले फेरि पीसीआर हुनुपर्दैन,” उनले भने, “यस्ता व्यवस्थाले पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्छ ।”
सीमा नाका खोल्ने र पीसीआरको विषय परिमार्जन गर्ने भनेर नयाँ पर्यटनमन्त्रीले भनेको भन्दै उनले छिटो त्यो व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । “यदि सीमा नाका खुल्यो भने आन्तरिक मात्रै होइन भारतीय पर्यटक पनि आउनेछन् । मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न भारतीय पर्यटक आउन निकै उत्सुक छन् । अहिले आउँदै नआएको पनि होइन । चोर बाटो अपनाएर आउनेलाई केही नचाहिने स्थिति छ । त्यसैले चोर बाटोबाट होइन कि सीधै आउन दिने व्यवस्था बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “विशेषगरी प्रदेश सरकार पर्यटन गन्तव्य खुलाउन र विभिन्न कार्यक्रम गर्न निर्णायक तहमा जानुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी टान पोखराका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीहरूका लागि एक साते पेड होलिडेको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । “पेड होलिडे गर्दा कर्मचारीहरू पनि घुम्न जान पाउने हुन्छ । त्यसले कर्मचारीलाई रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ,” उनले भने ।
पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका बोर्ड सदस्य विप्लव पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको पुनरुत्थान कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । राज्यले दुई वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । “हामीले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नै तिर्दैनौं भनेको होइन, तिर्ने समयावधि न्यूनतम दुई वर्षपछाडि राखिदिनुपर्छ । व्यवसाय फेरि सुरु गर्नका लागि वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्छ,” उनले भने, “मौद्रिक नीतिमा गरिएको पुनरुत्थानको प्याकेज कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्छ । गरेन भने मरेपछि औषधिको केही काम हुँदैन ।”
उनले आन्तरिक पर्यटनले मात्रै नेपालको समग्र पर्यटनको रिभाइभ गर्न नसक्ने बताए । “आन्तरिक पर्यटकले सञ्‍चालन खर्च पनि पुग्दैन । ६० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत योगदान आन्तरिक पर्यटकको होला । तर, कहिलेसम्म यसरी धानिएर मात्रै बस्ने ? २० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकबाट होटेल चलाएर फाइदा हुन्छ ? हुँदैन,” उनले भने । सरकारले नै व्यवसाय बन्द गराइदिएको तर ११ महिना भइसक्दा पनि खोल नभनेको उनले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभ सरकारबाटै सुरु हुनुपर्ने भन्दै पूर्वाधार लगानी गर्न आग्रह गरे । “पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गरोस् क्याम्पियन निजी क्षेत्रले गर्छ । गाडी हामीसँग छ, त्यसलाई चलाउन तेल हाल्ने काम राज्यले गरिदिनुपर्छ,” उनले भने ।
बाह्रखरी मिडियाले आगामी माघ २४ गते पोखरामा आयोजना गर्न लागेको एनसेल बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा पर्यटन व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बाह्रखरीले चौथोपटक आयोजना गर्न लागेको गल्फ प्रतियोगिताले पोखराको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छ ।